आफूसँग जुध्ने, अरुसँग भाग्ने – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsआफूसँग जुध्ने, अरुसँग भाग्ने
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- कतै नभएको जात्रा नेपाली फिल्ममा हुन्छ भन्यो भने गलत हुँदैन । किनकी, यहाँ जात्रा नै जात्रा हुन्छ । हुनत, नेपालमा जात्रा नाममा फिल्म पनि बनिसकेको छ ।
नेपाली फिल्म बनाउनेहरुको बुद्धी कहिले पलाउला ? नेपाली फिल्मको दुश्मन बलिउड र हलिउड फिल्म त भन्छन् रु तर, उनीहरुसँग जुध्ने हिम्मत कहिले गर्दैनन् । बरु, आफैसँग जुध्छन् र त्यसलाई सकेँ भन्दै मख्ख पर्छन् ।
फागूण १७ गते फिल्म दि ब्रेकअप नआएको भए के हुन्थ्यो रु तर, इगोको कारणले फिल्म आउँदा घाटा भयो । अभिनेता आशिरमान देशराजले स्टाटस लेखेरै फिल्म जुधेर घाटा दुबैलाई भयो यसै भनेका होइनन् ।
अब, चैत्र १ गतेको हालत पनि यस्तै भयो । तर, बलिउड र हलिउड सिनेमालाई भने मज्जाले डेट दिइन्छ । वैशाख १३ गतेकै कुरा गरौ न । यो मितिमा दाल भात तरकारी रिलिज हुने फाइनल थियो । यो मितिमा यो फिल्म रिलिज भएको भए पनि हुने खासै केही थिएन ।
तर, हलिउडको फिल्म एभेन्जरसँग दाल भात तरकारीले जुध्ने आँट गरेन । यसैले सिनेमा वैशाख २० गतेलाई सर्यो । यो फिल्म वैशाखको २० गते सर्दा अरुलाई असर गर्यो । वैशाख २७ गते रिलिज हुने भनेर तयार भएको जात्रै जात्राले यो मिति छाड्नु पर्यो । बरु, जात्रै जात्राले बलिउड फिल्म स्टूडेन्ट अफ दि इयरलाई ठाउँ खाली गरिदियो ।
तर, यसको असर नेपाली फिल्मलाई पर्यो । जेठ ३ गते यो मितिमा सुरुवातमा प्रेम दिवस आउने फाइनल थियो । तर, मिलन चाम्स निर्देशित फिल्म विर विक्रम २ यो मितिमा आइदियो । यो मितिमा विर विक्रम २ आएपछि प्रेम दिवसले आँट गरेन र खाली ठाउँ छाड्यो ।
तर, दाल भात तरकारीलाई २ साता दिनुपर्यो नी भन्दै जात्रै जात्रा जेठ ३ मा पुगेको छ । अब, एउटा सिनेमा सरेनन् भने जेठ ३ गते विर विक्रम २ र जात्रै जात्राको भिडन्त हुनेछ । यो भिडन्तले गाह्रो बनाउने नेपाली फिल्मका निर्मातालाई नै हो ।
तर, बलिउड र हलिउड फिल्मका लागि ठाउँ खाली गरिदिएर नेपाली फिल्म आफै जुध्छन् र आफै सकिन्छन् । यस्तो पाराले नेपाली फिल्मको विकास होला र रु बरु, आफ्ना लागि मिलेर ठाउँ खाली गरौ । तर, हिन्दी र हलिउडसँग डराएर आफू आफू कहिलेसम्म मर्ने ?
laates nepali movie gossip
सन्तोष राईलाई ‘सेलिब्रेटी सम्मान’
फिल्मलाई मनोरञ्जनको उद्योग मानिन्छ । फिल्मले दिने पनि मनोरञ्जन नै हो । यदि यो सर्तलाई मान्ने हो भने आज शुक्रबार चैत १ बाट अल–नेपाल रिलिज भएको फिल्म ‘पुरानो बुलेट’ दर्शकका लागी राम्रो खुराक बन्न सक्छ […]
March 19, 2019 Tulasa Karki Feature News, Gossip, Kollywood, News 0